မိခင်မရှိတော့တဲ့ သခင်ရဲ့ သားလေးကို နို့တိုက်ရင်း သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ နွားမကြီး | BurmeseAsia
ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်တာ (၃) လပြည့်သည်အထိ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်လို့ ယူကျုံးမရ ဖြစ်နေရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို အဝေးကနေ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ထားထက်ထက်
ကြက်ဝိုင်းတွေမှာ ကြက်တိုက်ပြီး သာယာနေတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မြင့်မြတ်
ချစ်ရတဲ့ မေမေနဲ့ အတူ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ များစွာ ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ပီတိဖြစ်စွာ ဖော်ပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဖခင်ကြီးရဲ့ ၁ လပြည့် အတွက် We love အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူ ဆွမ်းကပ်ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ရတနာမိုင်
မွေးကာစ ကလေးငယ်လေး တစ်ဦး လမ်းမှာ စွန့်ပစ်ခံရကြောင်း သိသိချင်းမှာပဲ သူမရဲ့ဂေဟာမှာ မွေးစား စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ချစ်သူ ကောင်လေးမွေးနေ့တွင် သူမ ပုံနှိပ်ထားသည့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့သော ကောင်မလေး
အပြာမင်းသမီး နဲ့ အတူ တစ်လနေခွင့်ဆု ကံထူးခဲ့တဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
ပရဟိတလုပ်ရင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရလို့ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ ရွှေကြာလူမှုကူညီရေးအသင်း တည်ထောင်သူ မရွှေကြာ
ဆက်ဆီကျပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့. နာမည်ကြီးနေတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေး
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို တရုတ်နိုင်ငံက လက်ကိုင်ထားပါတယ်လို့ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ပြောကြား
တနိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ရထားနှင့် မြို့ပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ကားများဖြစ်ရမည်ဟု အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် ပြော
အာဆီယံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဦးဘိုလှတင့်အား NUG ခန့်အပ်
မြန်မာ့အရေး စာရေး‌ပေးပို့ခဲ့သည့် မြန်မာကလေးငယ်ထံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင် ပြန်စာပေးပို့
မြန်မာမပါတဲ့ အာဆီယံဟာ အာဆီယံအပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်းက ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ ပြောဆို
Home News မိခင်မရှိတော့တဲ့ သခင်ရဲ့ သားလေးကို နို့တိုက်ရင်း သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ နွားမကြီး
မိခင်မရှိတော့တဲ့ သခင်ရဲ့ သားလေးကို နို့တိုက်ရင်း သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ နွားမကြီး
မိခင်မရှိတော့တဲ့ သခင်ရဲ့ သားလေးကို နို့တိုက်ရင်း သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ နွားမကြီးမင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မိခင်မရှိတော့တဲ့ သူ့သခင်ရဲ့ သားလေးကိုနွားမကြီးက နို့တိုက်ရင်း သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဆိုပေမယ့် မိခင်စိတ်ရှိတဲ့ နွားမကြီးအကြောင်းကို ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ မိခင်ဖြစ်သူက သားလေးတစ်ယောက် ကို မွေးရင်း မီးတွင်းထဲမှာပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလို ဆုံးပါးသွားတော့ လူမမယ်သားလေး မိတဆိုးလေးမို့ ဖခင်ဖြစ်သူခမျာ နို့ချိုတိုက်ကျွေးဖို့ အခက်ကြုံလာခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ရက်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ နွားမကြီးကလည်း နွားသားလေးတွေပေါက်လို့ အဆင်သင့်စွာပဲ သားလေးအတွက်နို့ချိုတိုက်ကျွေးရမဲ့ ပြဿနာက ပြေလည်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့နွားမကြီးနဲ့ သားလေးရဲ့ သံယော ဇဉ်ကြိုးလေးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ခိုင်မြဲလာပြီး ၃ နှစ်ကျော်ကျော် အရွယ် ရောက်လာတဲ့ သားလေးက သူကိုယ် တိုင်ပဲ နွားမကြီးရဲ့နို့ရည်ကို သောက်စို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မူကြိုအရွယ်မို့ သားလေးကျောင်းသွားရင်လည်း ညနေရောက် တိုင်း နွားမကြီးက ကျောင်းရှေ့ကိုလာ လာကြိုပေးတယ်။တစ်ရက်မှာတော့ နွားမကြီးနဲ့သားလေးရဲ့ သံယောဇဉ်တွေ အဆက် ပြတ် မယ့်နေ့ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်ညနေကျောင်းဆင်းချိန်လည်းရောက်ရော ပုံမှန်လာကြိုနေကြ နွားမကြီးက ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး သားလေးခမျာ နွားမကြီးကိုမျှော်ရင်းနဲ့အိမ်ကို တရွေ့ရွေ့ရောက်လာခဲ့ပြီး ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ သားလေးကမေးပြီလေနွားမကြီးက ဘယ်ရောက်သွားလည်း အဖေ ဆိုတော့ မျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေရှာတဲ့ဖခင်က ခုလိုပြန်ဖြေရှာပါတယ်သားလေးရဲ့နွားမကြီး ရောင်းလိုက်ရပြီသားရယ် အိမ်ကစည်းပွားရေး မကောင်းတော့ လယ်တွေယာတွေ စိုက်ပျိုးဖို့ မျိုးက ဝယ်ရဦးမယ်စားဝတ်နေရေးအတွက် အဖေဒီနွားမကြီးကို မရောင်းမဖြစ်တော့လို့ အဖေရောင်းလိုက်ရတာပါခိုင်းနွားတွေ ရောင်းလိုက်ရင် အဖေ့လက်မောင်းတွေ ဖြုတ်သလိုဖြစ်မှာမို့ မရောင်းချင်ပေမယ့်လည်း မတတ်သာတဲ့နောက် နောက်ဆုံး ရွေးချယ်လိုက်ရတာပါတဲ့။မိခင်တစ်ယောက်လို တွယ်တာခဲ့တဲ့သားလေး ငိုကြွေးရုံမှတပါး အခြားမရှိခဲ့ဒီလိုနဲ့မစားမသောက်ပဲ အိပ်ယာထဲ လဲခဲ့ပြီပေါ့ သားအဖြစ်ကို မကြည့်ရက် မမြင်ရက်နဲ့ ၂ ရက်လောက်သော နံနက် ခင်းမှာ အိမ်ရှေ့ က နွားအော်သံကြားရတော့ဖခင်ဖြစ်သူက အိမ်တံခါးဖွင့်ကြည့်ချိန် မျှော်လင့်မထားတဲ့မြင်ကွင်း ကြောင့် သားဖြစ် သူကို အိပ်ယာ
က နှိုးလို့ သားလေး ထကြည့်စမ်းပါဦးကွာ ဆိုပြီး သားဖြစ်သူက အိမ်ရှေ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် ပျော်ရွှင်မဆုံး ဖြစ်ရပြီပေါ့လေရောင်းလိုက်တဲ့ နွားမကြီး အိမ်ရှေ့မှာ ဝယ်သူ ကိုယ်တိုင်လက်က ဆွဲပြီး ရောက်နေလို့ဖခင်ဖြစ်သူကအကျိုး အကြောင်းမေးပါတော့တယ် ဝယ်သူက ပြန်ပြောပြလိုက်တာက ဒီနွားမကြီး အိမ်ရောက်တဲ့ နေ့ကတည်း ကဘာမှလည်း ကျွေးမရဘူးဗျာ မျက်ရည်တွေပဲ ကျနေတာ အစာလည်း မစားဘူး အော်နေတာညတိုင်းပဲ ဒါနဲ့အကြောင်းရင်းကို သိရအောင် ဒီပြန်ခေါ်လာတာပဲ တဲ့ဗျာဒီလိုနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကလည်း နွားမကြီးနဲ့ သားလေးရဲ့ အကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်တော့မှ ဝယ်သူက ဇာတ်ရည်လည် သွားပါတော့တယ်နောက်ပြီးတော့ ဝယ်သူကလည်း ကျုပ် ဒီနွားမကြီးနဲ့ဒီသားလေးရဲ့ သံယောဇဉ်ကို မဖြတ်တော့ပါဘူးဗျာ ငွေလည်းပြန်မပေးပါနဲ့တော့ ကျုပ် လှူပါတယ်မိခင်မရှိတော့တဲ့ သားလေး အတွက် မိခင်မေတ္တာစိတ်နဲ့နို့ ချိုတိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ဒီနွားမကြီးနဲ့ဒီသားလေးဘ ဝ ရေဆက်ရှိသရွေ့ နေထိုင်ပါစေတော့ဗျာ ဆိုပြီး နွားမကြီးကို ထားခဲ့ပြီး ပြန်သွားပါတော့တယ်။
တိရစ္ဆာန်ပင်ဖြစ်ပါစေ မျိုးမတူဘဝခြားပေမဲ့ သံယောဇဉ်နှောင်ဖွဲ့မှုတွေ မေတ္တာတရား ထားတတ်မှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လူသားကပိုလို့တောင် ရှိသင့်ပါတယ် ကျင်လည်ရတဲ့လူ့ဘ ဝ ခဏလေးမှာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးအပြန် အလှန်နားလည်မှုတွေ စာနာမှုတွေ မေတ္တာတရားတွေလွှမ်းခြုံပါသော လူ့အသိုက် အဝန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါရင် ဒီကမ္ဘာလောကကြီး သာယာအေးချမ်းသွားမှာ အမှန်ပါပဲလေ။
Previous articleမိုးကုတ်မြို့က ပြည်သူနှစ်ဦးကို စစ်အုပ်စုက ဖမ်းဆီးပြီး ၁ ဦး ၅ သိန်းဖြင့် ရွေးခိုင်းနေ
Next articleမြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံး ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
News Kyaw Htet - October 26, 2021 0
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရုတ်အင်အားကြီးထွားလာတဲ့အမျှ အမေရိကန်နဲ့ အခြားတိုင်းပြည်တွေ ကစိုးရိမ်မှု တွေရှိလာတဲ့ကြားမှ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်က ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းတွေကို အမြဲတမ်းလက်ကိုင်ထားမယ်လို့ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့တုန်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ယင်းသို့ တရုတ်သမ္မတ ရဲ့ ပြောကြားချက်ဟာဆိုရင် ယခုလအတွင်းမှာပဲ ထိုင်ဝမ်က ပြောလိုက်တဲ့ ၎င်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ...
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလျှပ်စစ်ရထားလမ်းနဲ့ လျှပ်စစ်ရထားတွေ ပြေးဆွဲဖို့၊ မြို့ပေါ်တွေမှာသုံးတဲ့ကားတွေဟာလည်း လျှပ်စစ်ကားတွေဖြစ်ရမယ်လို့ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ စစ်ကောင်စီခန့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှာ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်က “Public Transportation ကိုကျနော်တို့ကအားပေးဖို့လိုတယ်။...
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) သည် အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီးနှင့် ဆက်ဆံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ် ငန်းများ ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဦးဘိုလှတင့် အား သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်က ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဦးဘိုလှတင့်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ဦးဆောင်သည့် National...
BurmeseAsia is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
© 2020 [email protected]